Ny vokatra dia vita amin'ny alim-bolan'ny alimina manohitra ny fiafarana mba hiarovana ny fametrahana tariby. Ny firafitra misy azy dia ampidinin'ny bolt. Ny clip tazomina dia mifatotra, mitombina amin'ny fampifanarahana, mora sy malefaka amin'ny fametrahana ary tsy manisy ratsy ny tariby.
Ny tsorakazo no karazana elektroda mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny rafitra fitehirizana. Manome fifandraisana mivantana amin'ny tany izy io. Amin'izany dia manaparitaka ny herinaratra amin'ny tany izy ireo. Ny tsorakazo amin'ny tany dia manatsara ny fahombiazan'ny rafitry ny tany.
Ny tsorakazo amin'ny tany dia azo ampiharina amin'ny karazana fametrahana herinaratra rehetra, raha mbola eo am-pikasana ny hanana rafitra fitobiana mahomby, na amin'ny trano na amin'ny fametrahana ara-barotra.
Ny tsorakazo amin'ny tany dia faritana amin'ny alàlan'ny fanoherana manokana amin'ny herinaratra. Ny fanoherana ny tsorakazo amin'ny tany dia tokony ho avo kokoa noho ny an'ny rafitry ny tany.
Na dia misy toy ny singa iray aza izy io, ny tsorakazo mahazatra dia misy singa maro samy hafa, izay vy fototra, ary firakotra varahina. Izy roa dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny dingan'ny electrolytic hananganana fatorana maharitra. Ny fitambarana dia tonga lafatra amin'ny fanaparitahana be indrindra ankehitriny.
Ny tsorakazo avy amin'ny tany dia samy manana ny halavany sy ny savaivony nomeny. ½ ”no savaivony ankafizina indrindra ho an'ireo tsorakazo amin'ny tany raha 10 metatra ny halavany ankafizin'ny hazo.
Ny fametahana tsorakazo amin'ny tany dia fametahana herinaratra ambanin'ny tany izay ampiasaina amin'ny fampifandraisana ny faritra misy ny tsorakazo amin'ny tany tariby. Ny tsorakazo dia miantoka fa ny tariby vita amin'ny tany dia miorina tsara ary ny clamp dia mora ampiasaina amin'ny famitana ity fifandraisana ity.
Ny tsorakazo vita amin'ny vy dia vita amin'ny vy mavesatra be dia be mba hanoherana ireo voro-javaboary natoraly azy satria miharihary eo ivelan'ny tany.
Ny fametahana tsorakazo amin'ny tany dia misy savaivony samihafa. Ny safidinao dia miankina amin'ny savaivon'ny fitarihana tany sy ny tsorakazo.
Ny famolavolana haingam-baravarankely dia manome antoka fa mametraka fifandraisana matanjaka sy matanjaka amin'ny tsorakazo sy ny tariby amin'ny tany izy. Izy io dia mahatratra io tanjona io nefa tsy manelingelina ny fiasan'ny tariby miorina amin'ny tany.
Clamp Type Vibration Damper ho an'ny tariby ADSS / OPGW, miaraka amin'ny firafitry ny forkuning Damper Weight, dia nohamarinin'ny China Electric Power Research Institute fa misy refy efatra eo anelanelan'ny 5 ~ 150HZ, ary ny halaviran'ny hovitrovitra dia lehibe kokoa noho ny FG Damper na FD Damper. Napetraka tamina tariby ADSS ny «Dampers Vibration» marobe.
Turnuckles Amin'ny Bolt Eye sy Bolt Hook
Anaran'ny vokatra: Turnuckles misy bolt maso sy boloky hook
Fitaovana: Steel Steel
Surface Treatmnet: Galvnized, Stainless vy ary karazana fitsaboana ambonimbony hafa.